महिला अपमानित गर्ने उखान
समाज डा. अरुणा उप्रेती
परम्परा तथा संस्कृतिको नाममा प्रयोग गरिंदै आएका कतिपय उखान-टुक्काले लिङ्ग, जाति र समुदाय विशेषलाई अपमानित गर्छ।
बालबालिकाको मोटोपन घटाउन यति त गरौं!
कमसल खानाका कारण बालबालिकामा बढिरहेको मोटोपनको 'महामारी' विरुद्ध लड्न घरेलु पौष्टिक खानेकुराको प्रवर्द्धन गर्ने, पत्रु खानाको विज्ञापन नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट रोगको रोकथाममा खर्चने जस्ता सरकारी अग्रसरता आवश्यक छ।
कोरोनाकालमा किन गर्ने पोषणका कुरा?
खानपान र जीवनशैली परिवर्तन गरेर एक–दुई दिनमै रोगसँग लड्ने शक्ति बढ्ने पक्कै होइन, तर दिगो रुपमा स्वस्थ रहन यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई कोरोनाकालले सिकाएको छ।
कसरी बनाउने बच्चाले मन पराउने खाजा? आजभोलि धेरैजसो बालबालिकाले विद्यालय जाँदा घरको खाजा लग्दैनन्, खान मन पराउँदैनन्, पत्रु खाना मात्रै खान रुचाउँछन्। थोरै समय र ध्यान दियौं भने उनीहरूको बानी बदल्न सकिन्छ।
के हाँसोले स्वस्थ राख्छ? दैनिक मन फुकाएर हाँस्दा दुःख, पीडा मात्रै बिर्सिंदैन, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहन सकिन्छ।
जीवनभर स्वस्थ हुने कि स्वादमा रमाउने ? मोटो मानिसमा कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन्। खानपिनमा ध्यान पुर्‍याए जीउ घट्न सक्ने अनेक उदाहरण छन्। त्यसैले जीवनभर स्वस्थ भएर बाँच्ने कि स्वादमा मात्र रमाउने चाहिँ आफैँ विचार गर्ने हो।
योनी, समाज र सम्बन्ध केही दिनअघि दुर्गा कार्कीको कथाकृति ‘कुमारी प्रश्नहरू’ पढेपछि लाग्यो, नेपाली समाजमा अहिले पनि महिलाको यौनिकता, सामाजिक सम्बन्ध, प्रेम आदिबारे छलफल गर्दा १५औं शताब्दीकै मान्यता अघि सारिन्छ।
अपहेलित गुणी लट्टे, झुसे सिस्नो र गुमनाम करी पत्ता विदेशमा ‘सुपर फुड’ अर्थात् अति उत्तम खाना भनिने लट्टेलाई नेपालमा भने प्रायः वास्ता गरिंदैन । त्यस्तै प्राचीनकालदेखि नै औषधीय गुणयुक्त वनस्पतिका रूपमा चिनिए पनि सिस्नो खाने मान्छेलाई धेरैले हेयभाव राख्छन् । करि पत्ता चाहिँ धेरैले चिनेकै छैनन् ।
भाङ र दिउल खाऔं, स्वस्थ जीवन जिऔं फर्सीका बियाँ, आलस, भाङ./भाङो, सूर्यमुखी फूलका बियाँ, तिल आदि हामीकहाँ प्रशस्तै पाइन्छन् तर यसमा रहेको पौष्टिकताबारे कतिलाई थाहा छ ?
रजोनिवृत्तिबारे जनचेतना आवश्यक “३५–४० वर्षपछि महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दा बढी नै होशियार हुनुपर्छ।”
नाम अंग्रेजी, भोजन नेपाली अंग्रेजीमा राम्रो मानिएका परिकार नेपालीमा भनिंदा नराम्रो हुने मानसिकताका कारण हामी घरका फर्सी कुहाएर बजारका ‘पम्पकिन नट’ खोज्ने भएका छौं।
जङ्क फूड : मन्द विष
हिजोआज मेरा पाहुनाहरूले पनि कोदो, फापरको रोटी, सूप खुशी हुँदै खान्छन् । फोटो खिचेर फेसबूकमा राख्छन् । ढिलो भए पनि जनमानसमा रैथाने खानाबारे चेतना बढ्न थालेको छ ।
ब्लग डा. अरुणा उप्रेती
आफ्नो शरीर रेखदेखको लागि फुर्सद निकाल्न नसक्ने हो भने दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले गाँज्न सक्छ, त्यो बेला हामीले व्यस्त जीवनशैलीबाट गरेको कमाइको के अर्थ ?
‘चन्द्रनिघण्टु’ र ‘नेचुरल होम रिमेडिज’ यस्ता दुई पुस्तक हुन्, जसले हाम्रै वरपरका वनस्पतिको औषधीय उपयोगबारे बताउँछन् र दैनिक आहारविहारमा सजग तुल्याउँछन्।